Cudurka jadeecada oo ku fidaaya magaalada Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cudurka jadeecada oo ku fidaaya magaalada Göteborg
La daabacay onsdag 27 december 2017 kl 10.16
Cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay degmadda Göteborg, iyada oo ilaa hada 8 qof ay goobaha caafimaadka la xidhiidheen kadib markii ay qaadeen feeyruska dhaliya jadeecada.
Cisbitaalka Sahlgrenska ee magalaada Göteborg ayaa hada heegan ku jira una diyaargaroobaya la dagaalakan fiditaanka xudurkan.
Anders Goliger oo warbaahinta u qaabilsan cisbitaalka Sahlgrenska ayaa warbaahinta u sheegay in ay hada ogyihiin dhamaan dadka la tuhunsan yahay in ay khatar ugu jiraan qaadista cudurkan, waxaana ay noqon karaan boqolaal qof.
Fiditaanka xanuunkan ayaa lala xidhiidhinayaa ka dib markii uu 10-kii december uu qof u xanuunsan jadeecada yimi cisbitaalka Sahlgrenska halkaas oo ugu yaraan 5 oo la kulmay qofkan ay cudurka qaardeen hada. Inkasta oo cudurka jadeecadu yahay mid aad u fida ayaa hadana la rajeeynayaa in ay sahlanaan doonta joojinta fiditaankiisa. Sababta ayaa ah in uu Sweden ka jiro talaal lagu casuumo dhamaan caruurta, laga soo bilaabo 1970.
Anders tegnell oo ku takhasusay cudurada fida kana hawlgala haayada caafimaadka bulshada ayaa laanta wararka ee raadiyahay Sweden u sheegay in marar badan la arko fiditaanka jadeecada inkasta oo dad badan talaalan yihiin.
- Taalka wanaagsan ee aan haysano ayaa fududaynaya in la joojiyo fiditaanka, taa bedelkeeda aad ayey ugu adag tahay wadamada kale in ay joojiyaan fiditaanka jadeecada. Jadeecadu waa cudur aad u fida, hadii markaas aduunka loo safro waxa jira khatar ah in cudurkan la soo qaado oo lagula soo noqdo Sweden. Halkan oo markasta ay jiraan dad aan talaalayn ama difaacooda jidhka liito.
Wadanka Roomaniya ayaa isna laga soo sheegayaa in uu cudurka jadeecada ka dilaacay halkaas oo la sheegay in ay jadeecadu soo riday 10 000 oo qof, halka 36 qof la sheegay in ay u dhinteen.